၄၁ ဆက်မြောက် အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ချ်အိတ်ချ်ဒဗလျူဘုရှ်အား နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားဖြင့် စျာပနချ | Mizzima Myanmar News and Insight
၄၁ ဆက်မြောက် အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ချ်အိတ်ချ်ဒဗလျူဘုရှ်အား နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားဖြင့် စျာပနချ
၀ါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ။ ။ ကွယ်လွန်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၁ ဆက်မြောက် သမ္မတ ဂျော့ချ်အိတ်ချ်ဒဗလျူဘုရှ်ကို နိုင်ငံတော်စျာပနနဲ့ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရာမှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိဆဲ အမေရိကန်သမ္မတတွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အလံလွှမ်းခြုံထားတဲ့ ဂျော့ချ်ဘုရှ်ရဲ့ ခေါင်းတလားကို ၀ါရှင်တန် အမျိုးသား ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ နောက်ဆုံးထားရှိရာ လက်ရှိသမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မယ်လန်နီယာထရမ့်တို့ကို ဘုရားကျောင်း ရှေ့ဆုံး ခုံတန်းရှည်မှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
သမ္မတဟောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဘားရတ်အိုဘားမား၊ ဘီလ်ကလင်တန်၊ ဂျင်မီကာတာတို့ကလည်း ၎င်းတို့ ဇနီးတွေနဲ့ အတူ ကွယ်လွန်သူ သမ္မတဟောင်း ဂျော့ချ်ဘုရှ်ကို လာရောက်ဂါရဝပြု တက်ရောက်ကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဂျော့ချ်ဘုရှ်ရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဂျော့ရှှ်ဒဗလျူဘုရှ်က ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ရင်ထဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးမွှမ်းစကားတွေ ပြောကြားပါတယ်။ သောကြာနေ့မှာ အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်တဲ့ ဖခင် ဂျော့ရှ်ဘုရှ်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို ချီးမွှမ်းပြီး ဂျော့ရှ်ဒဗလျူဘုရှ်က တေးသီချင်းသီဆိုချိန်မှာ စိတ်ပန်းပြေကာ ရယ်မောကြပါတယ်။
“အဖေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ အလင်းရောက်ပါပဲ။ သူ့ သမိုင်းကို စာအုပ်ရေးကြတဲ့အခါမှာ ဂျော့ရှ်အိတ်ချ်ဒဗလျူဘုရှ်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ သမ္မတတစ်ယောက်ြုဖစ်ကြောင်း ရေးသားပြောဆိုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”လို့ ဂျော့ရှ်ဒဗလျူဘုရှ်က ချီးမွှမ်းစကား ပြောကြားပါတယ်။
၁၉၈၉ ကနေ ၁၉၉၃ အထိ သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ရှ်ဘုရှ်ရဲ့ နိုင်ငံတော်စျာပနကို ဝေလမင်းသား၊ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကဲလ်နဲ့ ဂျော်ဒန်ဘုရှင် အက်ဘ်ဒူလက်ရှ်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြင့်မြတ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အကောင်းဆုံးသော ဖခင်လို့ သားဖြစ်သူ သမ္မတဟောင်းက ချီးမွှမ်းတဲ့ ဂျော့ချ်ဘုရှ်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို သူ့ဇာတိ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဘာဘာရာရဲ့ မြေပုံဘေးမှာ မြုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
U.S. President George H.W. BushThe funeral of the 41st US president George H.W. Bush